Version 0.6.5 – Ugbu a, na atụmatụ dị obere chinchi
October 26, 2010 site na rịọ 8 Comments
Chinchi - gotta ha n'anya
Version 0.6.5 ka lekwasịrị anya squashing ụfọdụ chinchi (ma ole na ole regressions oke). Ọ bụ nnọọ ọtụtụ anụ na mma software anyị wepụtara taa. Ọ na-agbakwụnye, support ụfọdụ nkụnye eji isi mee anwansi nke search maqbx chekwebe.
Na-ahapụ dị nyochaa mgbanwe log ebe a:
Ofu Slovenian ọkọlọtọ ahụhụ kọrọ site na anphicle (Ọ bụ Sierra Leon tupu, ekele maka nkọ anya!).
Ofu onye nke na ụzọ WordPress ejiri canonical redirects na URL rewritings ka kọrọ site na maka, WordPress enweghị ihe ọmụma banyere otú anyị sụgharịrị na mkpado ma Atiya prefixed urls ya mere ibugharị ha ndabara asụsụ URL. Nke a fix nakwa mma a canonical ụdị ụfọdụ URLs.
Ofu ahụhụ na ịsụgharị niile mgbe post translation nke-egbochi ikike ha nwere na-arụ ọrụ – (ekele nightsurfer [tiketi #122]) – anyị na-ama na oge iji melite njikwa nke na-agafe ozi ịsụgharị niile iji meta kama a ébé.
Ofu json translation maka buddypress iyi nke – (ekele Inocima [tiketi #121]).
Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na a cleanup ke nnyịn trac usoro, na-ekenye oghe tiketi ọhụrụ milestones. Biko na-agbalị ime ka a na-eme mgbalị olileanya na site na-eke ọhụrụ tiketi anyị dị ka ngwa ngwa dị ka i nwere ike.
Ka mgbe – enwe a version.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: buddypress, bugfix, ọkọlọtọ sprites, obere, tọhapụ, A
October 26, 2010 na 6:14 obi
Nke a plugin bụ ịtụnanya. Jikwaa a na saịtị ahụ na asụsụ dị iche iche ugbu a bụ a ụmụaka egwuregwu.
Daalụ maka ọrụ gị.
November 3, 2010 na 3:45 obi
Ndewo, ebe ọ bụ na akpaka kwalite ka 0.65 M nwere nsogbu na m peeji nke: usem German faịlụ de_DE.po yiri ka ntụpọ. Na ndepụta isiokwu na mkpumkpu iche nke ọnwa translation mere abụghị okwu. Ya mere instea nke “October” i nwere ike ịhụ zuru ezu German Translation “Okt_Oktober_abbreviation”. Naanị ma ọ bụrụ na English na German aha bụ otu e gosiri n'ụzọ ziri ezi. Ya mere deactivated 0.65, azụ 0.61 (na 0.64 M ga-agbalị mgbe e mesịrị) – na: ihe niile na-arụ ọrụ ezi. Ugbu a, m na-ahụ “October”…
November 4, 2010 na 10:45 na
Ga-ịlele a, n'ihi na ugbu a Otú ọ dị ị nwere ike ịbụ gbanyụọ gettext mwekota ọhụrụ plugin, nke dị mma karịa downgrading
November 4, 2010 na 7:49 obi
M ji gị plugin ka ọtụtụ ndị na saịtị. Ọ na-enyere m saịtị ezi indexing site Google, Otú ọ dị, na saịtị ndị mgbe a ga-kwụsịtụrụ site Bochum na-eweta n'ihi elu ibu nkesa.
Tupu, M na-eji ya http://getfreegames.info, ma ugbu a,, m na-ewepụ ya. Nwere ike ị nye m ihe ngwọta (adịghị banyere upgrading Bochum)?
November 4, 2010 na 11:52 obi
Agaghị m agwa gị ka i nweta nkwalite gị mba, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ eleghị anya a ezi echiche.
Ihe i nwere ike ime bụ iji ole na ole omume ngwọta:
1. Jiri APC, a ga-ebelata ihe nkesa ibu n'ike n'ike
2. Jiri supercache ma ọ bụ yiri, nke a nwere ya uru na ụfọdụ ọghọm
A gụnyere ya ná ibu bụ iji gbanyụọ ndabere asụsụ ịsụgharị, nke ga-egbochi Transposh si agba ọsọ na gị mbụ asụsụ peeji nke, nke na-ejikarị na-ewe ọtụtụ ndị wɔfrɛ wɔn T.
ọ bụla ọzọ ngwọta na-nabatara
November 5, 2010 na 6:19 na
Daalụ maka gị n'oge na-adịghị azịza!
Ị pụtara na m ga-uncheck: “Kwado ndabara asụsụ translation (Kwe Ka translation nke ndabere asụsụ – bara uru n'ihi na saịtị na ihe karịrị otu isi asụsụ)”. ?
November 5, 2010 na 12:04 obi
November 6, 2010 na 6:52 obi
a ọhụrụ ntọhapụ, ọrịa na-agbalị ya ugbu a
Changeset na Transposh-wordpress [c4740c0]: Ee, we should reset the yandex proxy counters too on change. December 5, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [2fb9f69]: Wordpress 5 uses wp-json to post stuff to, we should not try to ... November 23, 2018
Changeset na Transposh-wordpress : PHP 7.2 deprecated create_function, so this is now an anonymous ... November 23, 2018
Changeset na Transposh-wordpress : PHP 7.3 has a different approach to - char in preg expressions, so in ... November 23, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [d4911aa]: Bing added Telugu November 23, 2018
rịọ na Version 1.0.3 – Gịnị mere ị zitere m ozi?
Fabio na Version 1.0.3 – Gịnị mere ị zitere m ozi?
broad ocean na Version 1.0.0 – The oge eruwo